Norway oo ugu danbeyn wadaadkan ka dajisay dalka Talyaaniga. - NorSom News
Norway oo ugu danbeyn wadaadkan ka dajisay dalka Talyaaniga.
Wasiiradda cadaalada Norway Monica Mæland oo maanta galinkii hore shir jaraa´id oo ay qabatay, ku sheegtay in Norway ay saaka Talyaaniga ka dajisay wadaadka la xukumay ee Najumuddin Faraj Ahmad, kuna caan ah magaca Mulla Krekar.
Dowlada Norway ayaa horey u meelmarisay go´aan ah in wadaadkan loo gacangaliyo dalka Talyaaniga, kadib markii maxkamad Talyaaniga kutaal ay wadaadkan ku xukuntay danbiyo la xiriiro argagaxiso.
Qareenka wadaad Krekar ayaa warbaahinta u sheegay in go´aanka ay dowlada Norway sameysay uu ahaa mid laga xishoodo, ayna si aan sharci ahaan sax aheyn u celisay qof uu isagu ku tilmaamay danbilaawe inuu yahay.
Krekar ayaa isbuuc kahor dowlada Norway ku eedeeyay ineysan kiiskiisa daacad ka aheyn, isaga oo sheegay in xubnaha xukuumada Erna Solberg aysan dhex-dhexaad ka aheyn kiiskiisa.
Sidoo kale goor hore ayuu sii sheegay in xiligan uu codsanayo inaan loo dhiibin dowlada Talyaaniga, maadaama dalkaas uu aad ugu faafay xanuunka Corona-virus, isna uu kamid yahay guruubka u nugul qaaditaanka xanuunkaas.
Norway ayaa dhankeeda sheegtay in xaalada Krekar ay wixii hada ka danbeeyo si dhow ula socon doonto dowlada Talyaaniga.
Xigasho/kilde: Mulla Krekar er utlevert til Italia
Previous articleHey´adda canshuuraha oo dadka uga digeyso khiyaanadan.
Next articleDenmark: Labo qof wax ka badan ma kulmi karaan.